Ọmụmụ banyere mmiri nduku na-achọ ka ịrụ ọrụ mmiri nke ọma karịa - Journal "Potato System"
Mụọ mmiri mmiri ihe ọkụkụ chọrọ ka mmiri ga-arụ ọrụ nke ọma
Mmiri dị mkpa maka mmepụta nri, ọrụ ugbo na-ewetakwa ihe dị ka pasent 70 nke mmiri ọhụrụ a na-eri n'ụwa. Dika mba na-abawanye mmeputa ihe ubi (site na 2050, FAO na-eme atụmatụ na ihe ruru ijeri 9,7 mmadụ ga-eri nri), ala mmiri ga-abawanye karịa 50%. Agbanyeghị, mgbanwe ihu igwe ebelatala mmiri mmiri maka ihe ubi na mpaghara ụfọdụ.
Iji nyere ndị ọrụ ugbo aka ịnagide nsogbu a, International Potato Center (CIP) na-enyocha ụzọ iji meziwanye mmiri. Nnyocha ndị ọkà mmụta sayensị na ụmụ akwụkwọ si na CIP na National Agrarian University nke La Molina dị na Peru mere na nso nso a gosipụtara na enwere ike iji onyogho sitere na igwefoto infrared (thermographic) chọpụta nrụgide mmiri na ihe ọkụkụ ma wee jiri mmiri rụọ ọrụ nke ọma.
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta nke onye ọka mmụta sayensị CIP bụ David Ramirez duziri ọtụtụ nyocha na nso obodo Lima, Peru, iji chọpụta otu esi eji mkpokọta agba na foto infrared iji nyochaa nrụgide mmiri na osisi nduku.
Ndị ọrụ nyochara foto nduku ahụ n'ehihie wee jiri ihe eji emeghe oghere CIP akpọrọ Thermal Image Processor (TIPCIP) iji chọpụta mgbe osisi ahụ ga-ekpo ọkụ nke ga-agba ya mmiri. Site na mmiri nanị mgbe osisi ahụ rutere n'ọnụ ụzọ a, ndị na-eme nchọpụta nwere ike belata oke mmiri eji eme ihe.
"Ihe mgbaru ọsọ bụ iji chọpụta ntakịrị mmiri dị mkpa maka poteto iji nweta ezigbo owuwe ihe ubi," ka Ramirez kwuru.
“Nchikota nlekota oru na mmiri ogbugba mmiri nwere ike ime ka ndi oru ugbo belata oke mmiri a choro iji too poteto site na opekata mpe cubic 1600 kwa hectare, nke bu ihe dika okara ego mmiri eji eme ihe ala mmiri.
Njikọ nke njikwa mmiri kacha mma na iwebata ụdị mmiri ozuzo nwere ike ime ka mmiri nduku dịkwuo elu ma kwe ka ha tolite na mpaghara ebe nri dị ntakịrị ma ọ bụ enweghị nri ugbu a, ma ọ bụ n'oge ọnwa ọkọchị mgbe ala ubi na-ada.
Ramirez kọwara na ọ bụ ezie na enwere ike itinye igwefoto infrared na drones iji nyochaa nrụgide mmiri na nnukwu ugbo, ọnụahịa nke ihe ndị dị otú a na-akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ ugbo obere na ọkara. Ya mere, ọ na-ezube ịnwale nhọrọ ọhụrụ - ngwa nkwụnye nke na-eme ka smartphone dị na igwefoto infrared ma na-efu ihe dị ka $ 200. Ndị ọkà mmụta sayensị CIP mepụtara ọhụrụ, ụdị njirimara TIPCIP enyi na enyi maka smartphones ma na-eme atụmatụ ụdị nke ga-eme n'ọdịnihu nke ga-enye nkọwa doro anya banyere oge na ole mmiri chọrọ.
"Site n'iji teknụzụ na-emeghe oghere, anyị nwere ike inyere ndị ọrụ ugbo aka iwepụta nri na obere mmiri," Ramirez kwuru.
Agbanyeghị, ọ gbakwunyere, na teknụzụ dị otú ahụ ga-agbakwunye site na ịmatakwu mkpa mkpa njikwa mmiri ga-adịgide.
Ndi World Bank kwadoro Nchoputa a site na Mmemme Innovation National Agricultural (PNIA) na Mmemme CGIAR Research.
Tags: nlekota mmiri nke mmiriogbugba mmiri n'ubiịchekwa mmiri
Ọkachamara germination nduku akuku ngwaahịa
Na-eto nduku na stachi. Ahụmahụ Lyckeby nke ọma
N’afọ 2020, a ga-emejupụta ọrụ mgbapụta iri abụọ na mpaghara Stavropol
Mmepe nke iwegharia ala na-emepe ohere ohuru ohuru maka mpaghara Volgograd
RUB 1,9 ijeri Ndi oru ugbo Russia ritere ego ntinye aka maka ihe omume ha
Onye mebere akwukwo nri
Biko soro ọnụ ụzọ ahụ gaa na akaụntụ gị ka ị zaa ajụjụ banyere ozi ọma.